အပွင့်လေးတို့နဲ့ VZO | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ပြီးတော့ ခေါ်ပုံက အပွင့်လေး တဲ့...
အပေါ်က တယောက်ကလဲ ပါမယ်၊ ပျော်မယ် ဆိုတာချည်းပဲ... ဟိုမှာက ဆယ်နှစ်သမီးလေးတွေ ကနေ၊ ဆိုနေကြတာကို...း((
မမမိုးချိုသင်းရေ ဖတ်မိတိုင်း ကြည်နူးစွာ ပြုံးမိတာချည်းပဲ ရေးတတ်လိုက်တာ
မမသက်ဝေ အပေါ်က တယောက်လည်း ၁၀ နှစ်ပါပဲလေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ၂ခါပြန်လောက်က သူလည်း ၁၀ နှစ်ပဲ မမရဲ့ 
ဒေါ်ဒေါ် တို့ ရဲ့ ဖီလင်များပေါ့လေ.. မချိုသင်းရယ်။း)
ဟာကွာ..အဲဒီကောင်မလေးလိုသာ ဟိုတုန်းက ဆိုခဲ့မိရင် အကောင်းသား။ဟဲ..ဟဲ
တူမလေးတွေက သွက်သွက်နဲ့ အဒေါ်တစ်ယောက် X-15စီးလိုက်ပါမှ တော်ကာကြမယ်နော်။
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ တူမလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အဒေါ်တွေလည်း အဖော်ရ၊ အပျင်းလည်းပြေ...မာယာလေးကတော့ အမတွေနောက် လိုက်ဝါးရတာ ပင်ပန်းရှာရော့မယ်..:)..
ဟုတ်ပ ချိုသင်းရေ... သူတို့ပြောသမျှ လိုက်မီအောင် မနည်းလိုက်နေရတာ..နားမလည်ရင် သူတို့က ဟားကြသေးရဲ့...ကစားနည်းတွေကလည်း သူတို့ အချင်းချင်းတော့ နားလည်လွယ်ကြသား...
ချိုသင်းရဲ့ စာတွေက အချစ်တွေနဲ့ ရေးထားတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ကို စိတ်ထဲ ပျော်ရွှင်နေမိတာပဲ...
သတိရတိုင်း လာလာချောင်းကြည့်ပါတယ် ချိုသင်းရေ... ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကျန်းမာကြပါစေနော်..
သီချင်းနားထောင်ပြီး မန့်ဖို့ မေ့သွားတယ် ခု တခေါက်ပြန်လာ နားထောင်တာ အမ ချိုသင်း..း)
ဘုရား ဘုရား တောင်တပြီး ဖြုံရပါတယ်။
နွေထွေးတဲ့ ခံစားမှုလေး ရပါတယ်။
ကြည်နူးစရာ၊ ပျော်စရာပါပဲ အမရယ်။
တူမတို့ရဲ့ ကစားနည်းက ကောင်းလိုက်တာ။
ချိုသင်းရေ...၁၀ကျော်သက်ကလေး သီချင်းဆိုတာ လင့်ခ်ကနေ ကြည့်သွားတယ်...ချိုသင်း တူမလေး ဖင်လေး လိန်ကျစ် လိန်ကျစ်နဲ့ လှုပ်ကနေတာကို မြင်ယောင်မိတယ်...နောက်တခါကျရင် သူ ကတာလေးပါ တွဲတင်ပေးဟယ်...။
မမချိုသင်းရဲ့ ကလေးလေးတွေက ငယ်ပေမယ့်
တော်လိုက်တဲ့ကလေးလေးတွေ၊ အန်တီချိုသင်းကြီးတော့ ကြည်နူးလိုက်ရမယ့် ဖြစ်ခြင်းနော်။
ဟိုကလေးလေးဆိုထားတဲ့ သီချင်းနားထောင်ပြီးပြီ အရွယ်နဲ့တောင်မလိုက်ဘူး ဆိုတတ်လိုက်တာဗျာ။ ဒီအရွယ်လေးနဲ့ အသံတော်တော်ပိုင်နေပြီ။
အဝေးက အရင်းအနှီး သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ပြောဖို့ဆို.. VZO ကလည်း ကောင်းသားနော်...
မိသားစု များနဲ့ အမြဲ touch လုပ်နေတာ ကောင်းသော အလေ့အကျင့်လေး တခုပါ ... သီချင်းလေးကလည်း နားမလည်ပေမယ့် သံစဉ်လေးက အရမ်း နားဝင်ချို ပါတယ်ဗျာ ..
ဟိုတလော ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ ကလေးတွေမဟုတ်လား... ပုံထဲမှာ အပြာရောင် ပိုက်လုံးကြီးတွေတောင် ပါသေးတယ်လေ...
Saya Nay Win Myint : http://www.multiupload.com/0JYJ10IJBD
Sayarma Juu : http://www.multiupload.com/WPWPCH14MN
Saya Chit Oo Nyo : http://www.multiupload.com/TMUEQWY8P1
Nay Win Myint…….. http://www.mediafire.com/?jywmbimwzg2
Chit Oo Nyo……….. http://www.mediafire.com/?wjgzvazyned
အဒေါ်လည်း dutch လိုသင်တော့မှထင်တယ် မမချိုရေ
တို့ရုံးကားက ချိုသင်းတို့ မင်းကြီးလမ်း အိမ်ရှေ့က ဖြတ်တယ် ချိုသင်းဘလော့ကို မသိခင်ကတည်းက ဆရာတင်မိုးအိမ်ဆိုပြီးသိတယ်။ ဆရာက အိမ်ကိုလည်း ကဗျာဆန်ဆန်ဆောက်ထားတယ်လို့ ပြောဖြစ်တယ်။ ချိုသင်းလဲ ဆရာ့သမီးပီသတယ်နော်
မာယာ လိန်ကျစ် လိန်ကျစ် မျက်စိထဲ မြင်ယောင်တယ်။
စာဖတ်ပြီးပေမယ့် သီချင်းနားမထောင်ရသေးလို့ ခုမှလာမန့်ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်သွားပါတယ်။ VZO တော့ တစ်ခါမှ မသုံးဖူးဘူး။ Gtalk တောင် သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။ အစ်မမှတ်တမ်းကတော့ အမြဲဖတ်ဖြစ်တယ်။ Merry X'mas မှာ ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ :)
အိမ်ကတစ်ယောက် လဲ အက၀ါသနာပါတယ်။။
ချိူသင်းတို့ကလဲ စောင့်ဖတ်ရတာကြာမှကြာ ဖတ်ရတော့လဲ ကြည်နူးစရာ..
ငါ့တူမတွေပုံ တင်ပါဦး ချိုသင်းရဲ့
အိမ်နဲ့ vzo ချက်ရင် အမေ့ ရုပ်သာ မြင်ရပြီး အသံက မကြား
ကြားရတော့လဲ ဟလို.. ကြားလား မကြားလားနဲ့ အချိန်သာကုန်သွားရော...
အယ် ... မမရေ ဟုတ်ပနော်။ တကယ် နားထောင်လို့ ကောင်းတာပဲ။ ကလေးလေးက တော်လိုက်တာ။ မမတူမတွေမပြောနဲ့ နွယ်တောင် နားထောင်းရင်း ကချင်းလာတယ်။း)
ဟက်ပီး မယ်ရီခရစ်စမတ်ပါ အစ်မ MCT
Ma Cho Thin, thank you so much for this post as my little son loves it.
Ah Ma, thank you so much for this post as my little son loves it.
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် ဖြစ်ပါစေ ...
Merry X'Mas ပါ ချိုသင်းရေ့...
Ma Moe Cho Thinn ,Saya U Tin Moe & Dassk
ကလေးတွေ တအုံတမကြီးကို ရေးထားတာကို ဖတ်မိပြီး... သြော် ငါ အတော် နောက်ကျနေပါလား... လို့ သံဝေဂ ရသွားပါတယ်။ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်ပေါ့။ နောက်ကျတာက နောက်ကျတာပါပဲလေ။ ကြော်ငြာ မဟုတ်ပါ။
Is your blog design changed? Very nice!